ofisialy avy eny amin'ny foibem-pibaikoana misahana ny Covid-19 eny Ivato. Teo anelanelan'ny talata 24martsa tamin'ny 12 ora antoandro, hatramin'ny alarobia 25martsa tamin'ny 12ora antoandro izay salanisa 0 izay. Mijanona ho 19 ihany izany hatreto ireo olona mitondra ny trangan'aretina Coronavirus eto Madagasikara. Fitiliana miisa 150 kosa no natao tao anatin'io fe-potoana io. Fitiliana izay natao tamin'ireo olona nandeha tamin'ireo zotram-piaramanidina farany avy any ivelany niditra teto amintsika. Teo ihany koa ireo olona nifandray tamin'ireo olona vao tonga ireo ; ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina niasa nandritra ireo fotoana ireo izay miisa 22 ary ankoatra azy ireo dia nisy ihany koa ireo olona nahiboka sy natoka-monina harahi-maso. Araka ny fanazavan'ny Doyen de la faculté de Medecine dia ny olona farofy sy efa mahazo taona no mety hanao endri-pisehoana misy fahasarotana na "forme grave" amin'ny aretina Coronavirus. Ny zokiolona no tena marefo indrindra amin'izany ankoatra ny olona marary. Mety hampiakatra ny taham-pahafatesana anefa ny zokiolona raha toa ka mitondra ity trangan'aretina ity, toy ireo izay hita any amin'ireo firenena nisehoana fahafatesana noho ny Coronavirus. Ho fisorohana izany dia miantso ny olona marefo, indrindra fa ny zokiolona ny lehiben'ny fakiolten'ny Medecine eto Antananarivo mba handray fepetra sy hampiakatra ny hery fiarovana ao aminy amin'ny alalan'ny fihinanana sakafo feno vitamina C sy sakafo be otrikaina toa ny koba, soja, …. Ankoatra ny fiarovan-tena amin'ny alalan'ny fihibohana ao an-trano. Ando